China Punching art paneli YA601 vagadziri uye vanotengesa | Yingjiwei
Punching art pani YA601
Zvimiro zvealuminium perforated art pani
1. Nyore kugadzirisa uye kubaya mhando dzakasiyana dzemapatani
2. Nyore kuisa
3. Akanaka kutsvinda
4. Makobvu akasiyana uye saizi
5. Kunaka kwezwi kwakanaka
6. Kuwanda kwesarudzo yekuzarura 8. Chiedza chechiedza
7. Hupenyu hwakareba hwebasa
8. Yakagadzikana nharaunda, inogona kuve 100% yakashandiswazve.
Punching art pani inonyanya kugadzirwa yemhando yepamusoro aruminiyamu chiwanikwa ndiro kuburikidza zvemaziso perforation. Seimwe yezvigadzirwa zvakawanda zvealuminium veneer, yakasarudzika uye ine fashoni, iine mavara akasiyana uye maumbirwo ekubaya, ayo anogona kugadzira yakasarudzika mamiriro ehunyanzvi uye kusimudzira pfungwa yehutongi uye hunyanzvi hwechivakwa.
Kubaya chimiro chekurova aruminiyamu veneer chinhu chakakosha paramende kuti uone kana kuonekera kwechigadzirwa kwakanaka kana kuti kwete. Kazhinji kutaura, iro rakapetwa pani inogona kuve yakagadzirirwa kutenderera, mativi, plamu chimiro uye mamwe maumbirwo zvinoenderana nedzidziso yezvinodiwa. Iyo yakakura gomba, kureruka muhuremu, asi iyo inopesana neanomanikidza simba uye tensile simba, iyo inokanganisa kushandiswa kwekurova kwealuminium veneer.
Chigadzirwa zita Kubaya art pani
Chinhu It. YA601
Pashure: Modelling panhare YA206
Zvadaro: Aluminium pani-YA101